Ciidamada Ethiopia oo isaga baxay magaalada Cadaado – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Ethiopia oo isaga baxay magaalada Cadaado
Wararka naga soo gaarayo magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in ciidamadii Ethiopianka ahaa ee ku sugnaa Cadaado ay isaga baxeen,iyagoo u ruqaansaday magaalada Dhuusa-mareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
Ciidamada ka baxay Cadaado oo aan dalka ku joogin Mandate-ka AMISOM ayaa la sheegay inay u jiheysteen magaalada Dhuusa-mareeb oo ay ka taliyaan ururka Ahlu sunada gobolada dhexe.
Ilaa iyo hada lama sababta ciidamada Ethiopia kaga baxeen magaaladaasi oo ay amaankeeda sugayeen mudadii uu ka socday shirka maamulka loogu sameynayay Shacabka gobolada Mudug iyo Galgaduud,waxaana bixitaanka Ciidamada Ethiopian Risaala u xaqiijiyay dadka deegaanka.
Xiriiro aan la sameynay maamulka Galmudug ayaa inoo suurta gelin,si aan wax uga weydiino sababta ciidamada Ethiopia uga baxeen magaalada Cadaado.
Amaanka magaalada ayaa waxaa la wareegay ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa Nabad sugida Dowlada Federaalka Soomaaliya,kuwaasi si wada jir ah isaga kaashanaya adkeynta amaanka.
Ninkii Fuliyey Qarixii Hotel Jazeera oo la xaqiijiyay inuu ahaa Soomaali Jarmal
Dawlada oo ku dhawaaqday meesha shirka barito lagu qabanayo